Taliyiha ciidanka booliska Puntland oo is casilay - Halbeeg News
GAROOWE (HALBEEG)- Taliyaha Guud ee Ciidamada Puntland Jeneraal Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) ayaa Maanta oo Axad ah iska casilay xilka isaga oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax u tartamaya qabashada xilka Madaxweynenimo ee maamul goboleedla Puntland ee lagu wado in ay qabsoonto Janaayo 2019.
Jeneraal Siciid dheere oo Shir Jaraa’id Warbaahinta ugu qabtay Magalada Garoowe ee magaala madaxda Puntland ayaa sheegay in uu musharax u yahay xilka Madaxweynaha Puntland,isla markaana hadii uu doorashada ku guuleysto uu wax badan qaban doono xaaladaha ka jira maamulka Puntland.
Taliyaha oo madax u ahaa ciidamada Puntland ayaa ka mid noqanaya musharixiinta dhowrka ah ee u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Maamlka Puntland.
Dhanka kale Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isla maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 28-ka Oktober 2018 magacaabay Taliayihii badali talyihii Ciidanka Booliska Puntland ee isu sharaxay tartanka xilka madaxweynaha Puntland.
Wareegtadan ka soo baxaday xafiiska madaxweyne Gaas ayaa taliyaha cusub ee ciidanka booliska Puntlanad loogu magacaabay S/Guuto Muxuyadiin Axmed Muuse.
“Xeer Madaxweyne Lr.158 October 28, 2018, kuna saabsan magacaabid Taliaya Ciidanka Booliska Dowladda Puntland. Madaxweynaha Maamulka Puntland. Markuu Arkay: Dastuurka Puntland Markuu arkay: Aqoontiisa iyo Khibradiisa shaqo Wuxuu Xeeriyey: in S/Guuto Muxuyadiin Axmed Muuse loo magacaabay Taliaya Ciidanka Booliska Puntland, Xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa markuu madaxweynuhu Saxiixo” ayaa lagu yiri wareegtadan kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Punrland.
Madaxweyne Farmaajo oo markii labaad shir wadatashi ah ku martiqaaday Madaxda Dowlad Goboleedyada